Yakanakisa Yakagadziriswa inground kusimudza akateedzera Mugadziri uye Fekitori Tonghe
LUXMAIN parizvino ndiyo yega yakasarudzika ingound yekusimudza inogadzira ine yakazvimirira yehungwaru kodzero dzenzvimbo muChina. Takatarisana nematambudziko ehunyanzvi eakasiyana maitiro e geological mamiriro uye maitiro masisitimu, isu tinopa kutamba kuzere kune kwedu kwehunyanzvi zvakanakira mu hydraulics uye mechatronics, uye nekuenderera mberi nekuwedzera mashandiro eminda yekukomberedza malifts kusangana nezvinodiwa zveakasiyana maitiro ekushandisa. Iyo yakateedzana inoteedzana yepakati uye inorema-basa yakapetwa-post post kuruboshwe uye kurudyi kupatsanura mhando, ina-post kumberi uye kumashure kupatsanurwa yakatarwa mhando, ina-post kumberi uye kumashure kupatsanura nhare inground lifts inodzorwa nePLC kana yakachena hydraulic system.
LUXMAIN parizvino ndiyo yega yakasarudzika ingound yekusimudza inogadzira ine yakazvimirira yehungwaru kodzero dzenzvimbo muChina. Takatarisana nematambudziko ehunyanzvi eakasiyana maitiro e geological mamiriro uye maitiro masisitimu, isu tinopa kutamba kuzere kune kwedu kwehunyanzvi zvakanakira mu hydraulics uye mechatronics, uye nekuenderera mberi nekuwedzera mashandiro eminda yekukomberedza malifts kusangana nezvinodiwa zveakasiyana maitiro ekushandisa. Iyo yakateedzana inoteedzana yepakati uye inorema-basa yakapetwa-post post kuruboshwe uye kurudyi kupatsanura mhando, ina-post kumberi uye kumashure kupatsanurwa yakatarwa mhando, ina-post kumberi uye kumashure kupatsanura nhare inground lifts inodzorwa nePLC kana yakachena hydraulic system. Izvo zvigadzirwa zvave zvichishandiswa zvakanyanya mukugadzira mota uye kugadzira, michina yekugadzira yekugadzira, general maindasitiri ekugadzira mitsara.
Siemens Electric Drive Co., Ltd. pfapfaidzo kupenda chiteshi Kuputika-chiratidzo kupatsanurwa kaviri post inground kusimudza
Kaviri kutumira kuruboshwe uye kurudyi kupatsanurwa.
Tora LUXMAIN proprietary hydraulic yekuyenzanisa control system.
Iyo yemagetsi yekudzvanya sisitimu inotora kuputika-chiratidzo dhizaini, uye iyo nhanho yekudzivirira yemagetsi magetsi bhokisi ndeye IP65.
Iyo yekusimudza posvo inotora chikamu chekudzivirira chevhavha kudzivirira pendi kubva pakupaza pane yekusimudza posvo panguva yekupenda mashandiro.
Max. Nokusimudza chinzvimbo: 7000kg
Max. Nokusimudza kukwirira: 1900mm
Linde (China) Forklift Co, Ltd. inground kusimudzira yemagetsi forklift gungano mutsara
Yakakura eccentric mutoro kuruboshwe uye kurudyi.
Iyo pallet yakagadzirirwa nesimbi isina tsvina yekutevera-up yekudzivirira yekuvhara kudzivirira wega kukuvara.
Yakashongedzerwa nechiedza-chekucherechedza chishandiso mudziyo, zvinomira zvoga mushure mekuona zvipingaidzo.
Max. Nokusimudza chinzvimbo: 3500kg
Max. Nokusimudza kukwirira: 650mm
Wirtgen Machinery (China) Co., Ltd. inground lift ye paving machine musangano mutsara.
Mberi uye neshure kupatsanura ina-ikholamu mhando, hydraulic yekudyidzana sisitimu + yakaoma kuenzanisira danda yekudzivirira michina inochengetedza kumberi uye kumashure, kuruboshwe uye kurudyi kuwiriranisa, mushure mekubudirira kugadzirisa, iyo isiri-mhosva nyika ichaenzaniswa kwehupenyu hwese.
Yakakura kumberi uye kumashure eccentric mutoro, yakashongedzwa kumberi uye kumashure kusvetuka pallets, iyo yekusimudza ikholamu ine yakasimba yekukombama kuramba, uye inokodzera mota dzine dzakasiyana siyana zvivakwa.
Iyo nhambwe iri pakati pemazino ekuvharira eyakavharwa mamakaniki idiki, chete 1cm, uye tsvimbo yekukiya inotorawo basa rekutungamira uye kutsigira, uye tekinoroji yekugadzirisa yeiyo tsvimbo yakakwirira.
Yakashongedzerwa neanti-yekutsikirira tsoka tsoka chengetedzo.
Max. Nokusimudza chinzvimbo: 12000kg
Wirtgen Machinery (China) Co., Ltd. Kusimudza kwepasi pevhu kwekugadzira muchina gungano mutsara
Kubva pane dhizaini dhizaini, kunetsekana kwemidziyo kupidigura kwakagadziriswa zvachose. Njanji dzinoiswa pamubhedha wekusimudza uye pasi zvichiteerana. Mushure mokunge midziyo yadzokera pasi, njanji dzakapetwa uye njanji dzakaiswa pasi zvakabatana, uye musiyano wehurefu ndi≤2mm. Kana michina yekuvaka iine mutoro we32000kg ichangopinda pallet uye kwete ese akaendeswa mukati, Musiyano wehurefu unoramba usina kuchinja.
Yakakura eccentric mutoro kumberi uye kumashure
Max. Nokusimudza chinzvimbo: 32000kg
Pashure: Bhizimusi mota inground simudza akateedzana L7800
Zvadaro: Kaviri kutumira ingroud kusimudza L4800 (A) kutakura 3500kg
Anodenha Inground Anosimudza
Inground Auto Simudza
Rotary Inground Simudza
Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Kaviri Post Inground Simudza,